Iindawo ezi-30 eziBalaseleyo ze-All-inclusive kunye ne-Ski Resorts eUnited States kwizibini ezitshatileyo
By IVictoria Akpan TMLT Septemba 16, 2021 usapho, yokuPhila, hamba 0 Comments
Iindawo zokulala ezikufutshane nawe
Ngaba ujonga uhambo oluza kukunceda wonge imali ngelixa likuvumela ukuba uphumle kwaye wonwabe? Kwiindawo zokungcebeleka ezibandakanya wonke umntu eMelika, unokwenza nje oko, kunye nokunye okuninzi.
Ezi ndawo zigcweleyo zibonelela abakhenkethi ngayo yonke into ukusuka kumagumbi aphezulu okumgangatho ophezulu ukuya kwizidlo zasefama ukuya etafileni ukuya kwimisebenzi ekhokelwayo oya kufuna ukuyenza, kaninzi, uyenza ezilungele iintsapho, izibini, okanye ii-singles bezama ukuphucula impilo yabo.
Ukukhetha kwethu kubandakanya nantoni na evela kwipremiyamu, iindawo zokuchithela iiholide kunye nazo zonke izinto ezincitshisiweyo ukuya kwiindawo zokuhlala ezirhabaxa kwiikhabhathi zelog kunye amashishini okulala kunye nesidlo sakusasa.
Izinto zasimahla onokuzenza eTucson
Izinto zasimahla zokwenza eFresno
Izinto onokuzenza kwiMesa
free Izinto zokwenza eSacramento
Izinto zasimahla onokuzenza eNashville
Kuluhlu lwethu, uya kufumana amakhaya aselunxwemeni, iindawo ezibaleka ezintabeni, kunye neefreyimu zedude.
Iindawo zokuHlala eziPhambili eziBandakanyayo eUnited States
Iindawo zokuhlala ezibandakanya wonke umntu eUnited States zahlukile njengendawo yelizwe, ukusukela kwiindawo ekuchithelwa kuzo iitropiki ngamaxabiso abandakanyayo ukuya kwiirhasi zerusti, iihotele zaseVictoria kunye neendawo zokulala ezintabeni.
Oku kulandelayo luluhlu lweendawo ezilishumi zokungcebeleka eMelika nokuba zezi konke okubandakanya okanye ukubonelela ngeephakeji ezizodwa kunye nokwazisa okuqulethe uninzi lwezibonelelo ezifumaneka kuzo zonke iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezibandakanya wonke umntu.
1. IiBungalows eziphambili zeLargo eKey Largo, eFlorida
Olona phawu luphambili lothando ngabantu abadala kuphela Indawo ebandakanya wonke umntu eFlorida. Iveranda yangasese ene-tub yokuntywila, i-TV ekrelekrele yescreen, kunye nebhedi entofontofo enomatrasi womqamelo zonke zibandakanyiwe kwi-bungalow nganye ebanzi.
Thatha iklasi yeyoga elunxwemeni, yiya ebhankini kwisikhephe sangasese, okanye udle kwenye yeendawo zokutyela ezintandathu.
Iibhayisikile ziyafumaneka ukuba zisetyenziswe ziindwendwe, kunye nezifundo zeqela lemihla ngemihla, amachibi ahlukeneyo kunye neJacuzzis, kunye ne-spa yesiza (iindleko zonyango zongezwa).
2. Ifama yeVista Verde yeNdwendwe eClark, eColorado
Iindwendwe kwi IVista yeNdwendwe yeVista yeVista Unokuphila ubomi basemaphandleni ngelixa wonwabile ubunewunewu obumangalisayo kunye nobubi. Le fama yomlando ayinazo iifowuni, iiTV, okanye i-intanethi kumagumbi eendwendwe, ivumela iindwendwe ukuba zinqamle.
Ipuli yokudada, indawo yokuphumla edityanelweyo eneembono zepanoramic, indawo yokomelela, inkundla yokukhwela ngaphakathi, kunye necandelo labantwana elinentambo yezifundo ziphakathi kwezinto ezikhoyo.
Indawo yokuphumla enosapho ubulisa iindwendwe ngolwamkelo olufudumeleyo nolunobubele kunye nokuninzi kwamathuba okuba ube nolonwabo, oludala-kunye kunye.
Indawo yokuphumla iyaziwa ngenkqubo yayo yemisebenzi ebanzi, ebonelela kuluhlu olubanzi lomdla.
Ikhosi yegalufa yobuntshatsheli kunye ne-spa ekumgangatho wehlabathi ikwakhona eWoodloch Pine Resort.
Amachibi okubhukuda angaphakathi nangaphandle, ukunyuka kwamatye, i-kayaking, ikhephu, kunye nokuzonwabisa ebusuku zezinye zezinto ezikhoyo.
4. I-Lodge eLittle St. Simons Island, eGeorgia
Okubandakanya konke I-Lodge eLittle Saint Simons Island ilungele abo bafuna ukuzola, ukuzimela kunye nobuhle bendalo.
Inamahektare angaphezu kwe-11,000 yomhlaba kunye neelwandle ezingaphezulu kweekhilomitha ezili-32, kodwa ngabantu abangama-XNUMX kuphela abavunyelweyo ukuhlala ngalo naliphi na ixesha. Le yi indawo efanelekileyo yabantu abafuna isantya esincinci, ngonyango olwenzelwe wena kwimeko entle.
Ukutya okulungiselelwe kwindawo yompheki, ukuhambisa isikhephe ukuya nokubuya kwesi siqithi, kunye nohambo lwemihla ngemihla ekhokelwa zizinto zendalo ziyafumaneka.
Indawo yokuphumla, eyaziwayo njengenye yeendawo zokungcebeleka ezibandakanya bonke abantu eUnited States kwiintsapho ezisebenzayo, ibonelela ngento encinci.
I-Club Med Sandpiper Bay, njengezinye iindawo zokungcebeleka ezibandakanya zonke iiCaribbean, ivumela iindwendwe ukuba ziphumle echibini, zithathe inxaxheba kwimisebenzi yamanzi, kwaye zidle kwaye zisele njengoko zithanda.
Izixhobo zemidlalo ezinabaqeqeshi abanamava, iiklabhu zabantwana, kunye namachibi angaphandle ziphakathi kwezinto eziluncedo.
6. I-White Stallion Ranch eTucson, eArizona
I-White Stallion Ranch yeyona ndawo inkulu yokuhlala iholide ehambisa amava okwenyani kwinkcubeko yasentshona Melika.
Le ihotele ihlala ichazwa njengomnqamlezo phakathi kwedolophu enkulu kunye nendawo yokutyela kuba ibonelela ngeepakeji ezibandakanya bonke kubakhenkethi bayo.
Izixhobo zibandakanya iphuli eshushu kunye nebhafu eshushu, indawo yolonwabo, i-spa, ulonwabo ebusuku, kunye ikhalenda yomsebenzi wabantwana.
7. I-Skytop Lodge eSkytop, ePennsylvania
The Indawo yokuhlala izuluemi embindini weentaba zePoconos, ihambisa iindwendwe kwixesha elidlulileyo.
Indawo yokulala yakudala, eyakhelwe-ngaphakathi ngo-1928, ibonelela iindwendwe ngendawo yokuhlala ebutofotofo, kunye nokufikelela kwindawo erhabaxa yangaphandle. Zininzi izinto zokwenza kule ndawo yehektare ezingama-5,500 XNUMX.
Izixhobo ze-Spa, imisebenzi ye-adventure yangaphandle, kunye namava okutya amnandi zezinye zezinto eziluncedo.
8. iMiraval Arizona Resort & Spa eTucson, eArizona
The IMiraval Arizona Resort kunye ne-Spa yindawo yokuqala yeNkulumbuso yeholide yempilo, ukubetha ibhalansi phakathi kweentaba ezintle kunye nokuphilisa umoya wentlango.
Le ndawo yokulala ilungele abantu abafuna ixesha lodwa, njengoko ibonelela ngamaxabiso abandakanya konke kunye nokukhethwa kweenkonzo zokuvuselela i-spa.
Amasiko ohlaziyo lomzimba, ukhathalelo lweenwele, ulusu, kunye nonyango lokunyanga onke amandla afumaneka kule spa yokuphumelela amabhaso.
9. IKachemak Bay Wilderness Lodge, eAlaska
Okubandakanya konke IKachemak Bay Wilderness Lodge's Indawo yaseAlaska yinto yakudala, kodwa amagumbi okunethezeka, ukutya okumnandi, kunye neephakeji zomsebenzi we-bespoke akunjalo.
Ukutya oku-gourmet, indawo yokuhlala entle kwindawo entle, kunye namava endalo akhokelwa ngumntu ngambalwa zizinto ezikhoyo.
10. Ihotele eNkulu kwisiqithi saseMackinac, eMichigan
Ihotele enkulu, ebambeke kwinduli ekwisiQithi seMackinac, apho iimoto zingavumelekanga kwaye iinqwelo ezirhuqwa ngamahashe yeyona ndlela iphambili yezothutho, bubuhle baseMelika.
Kukuzonwabisa okubandakanya konke okufihlakeleyo, okugxininise kwimbali kunye nekhaya kwiveranda ende emhlabeni.
Amagumbi ayilelwe umntu ngamnye, ichibi elingaphandle, umdaniso wasebusuku, imidlalo engca, kunye neti yasemva kwemini ziphakathi kwezinto eziluncedo.
Iindawo ezili-10 ezigqibeleleyo zokuhlala eMelika
1. IHallmark Resort - eCannon Beach, eOregon
IHallmarkmark Resort, yenye yezona hotele zithandwayo kweli lizwe, imi kwenye yezona ndawo zintle kunxweme loMntla Oregon, ejonge indawo eyaziwayo iHaystack Rock.
Ikuvumela ukuba uhambe ngokuzonwabisa uhamba kwifayile ye- ulwandle olukhulu olugcwele isanti yeedola kulwandle olusezantsi, iinyawo nje ezisemnyango wakho.
Phonononga amachibi omsinga wamanzi amdaka agcwele ubomi baselwandle obumibalabala njenge-starfish kunye ne-hermit crabs, kwaye ugcine umlindelo wokufuduka kweminenga ukusuka ku-Novemba ukuya kuJanuwari nasekupheleni kuka-Matshi ukuya kuJuni.
Iibhalkoni ezineembono zePasifiki, kunye neendawo zokucima igesi kunye neebhafu zabantu zokuthambisa ii-spa, ziyafumaneka kumagumbi.
2. IAuberge du Soleil - iNapa Valley, California
INapa Valley yi indawo ethandwayo yabatshati, kodwa nasiphi na isibini esitshatileyo esifuna uthando siyokuyithanda, ngakumbi ukuba bahlala eAuberge du Soleil.
Indawo yokuhlala kule ndawo intle, phakathi kwe-oki kunye neminquma, eneembono ezingalinganiyo zezidiliya kunye neMayacamas Mountains.
Yeyona ndawo iphambili kubantu abatshatileyo, kwaye kunjalo Yaziwa ngokutya ilizwe layo lewayiniNdiyabulela kwinto yokuba yasekwa yindawo yokutyela eneenkwenkwezi eFrance.
Kwisiza, kukho isisele esinebhotile eyi-15,000, kunye nekhefi kunye nebha yokutya okuqhelekileyo kunye nokusela iiglasi ekutshoneni kwelanga.
3. Indawo yozolo eBay Beach House Resort - eMarathon, eFlorida
Kunzima ukugqitha le Irizothi kwizibini ezifuna ubunewunewu, ukuba wedwa kunye neembono zepanoramic zeGulf of Mexico.
Kwisitshixo seMarathon, yenye yeendawo zokuphumla eziphambili eFlorida Keys, ebonelela ngendawo yokuhlala kumakhaya asezitropiki amaVictoria ahlukaniswe kumabali amabini anamagumbi okulala amathathu.
Zonke zibandakanya ikhitshi eligcwele gourmet, kunye neengcango zaseFrance kuwo omabini amanqanaba akhokelela kwiivaranda eziphangaleleyo ngokubona okumangalisayo kweGulf of Mexico.
Unxweme oluhle lwabucala, i-marina yabucala enohambo lokuhamba ngesikhephe, ibhari yolwandlekazi lwaselwandle, amadama amathathu okudada (umntu omnye kuphela), kunye nokuqasha imisebenzi yamanzi ziyafumaneka nakwiindwendwe.
I-Triple Creek Ranch, ebekwe eDarby, eMontana, kwaye ijikelezwe ziiNtaba zeBitterroot ezinomtsalane kwiiRockies zaseMontana, zihlala zibekwa kwiindawo zokuhlala ezilungileyo kakhulu kwihlabathi.
Yiyo yonke iholide ebandakanya yonke indawo entlango ebandakanya ukuhlala ubusuku kwii-log cab kunye namakhaya efama. Onke amagumbi afaka indawo yokubasa umlilo kunye nokufikelela kwisitya esishushu apho unokuhlala khona ezinkwenkwezini.
Ukunyuka intaba, ukukhwela ihashe, igalufa, kunye nokuntywila kwenja zizimbalwa zezinto ezikhoyo unyaka wonke. Ukutya okumnandi okulungiselelwe ngokutsha, izithako zalapha ekhaya nazo zibandakanyiwe.
Kwidolophu yesiporho eyalondolozwa ngokumangalisayo yenkulungwane ye-19 kunye nemithombo yayo eshushu yezimbiwa, iDunton Hot Springs inendawo entle entlango kunye neeNtaba zeSan Juan njengemva.
Indawo yokuphumla eneenkwenkwezi ezintlanu yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka kuyo yonke kwaye uqhagamshele kwakhona kunye naleyo uyithandayo.
Iringi yeekhabini zelogo zakudala ziye zahlaziywa zaba ziindawo ezintle zokubaleka ezinezinto ezinje nge-spa emnandi, ilayibrari egcinwe kakuhle kunye nebha.
IHara-Maui Resort, ejonge iHana Bay kumda wonxweme lwaseMaui, ihlala ikhankanywa njengenye yeendawo zokuzonwabisa zothando emhlabeni.
Lindela inkonzo ebalaseleyo, a I-spa ekumgangatho wehlabathi, ukutya okugqibeleleyo, kunye nemisebenzi eyahlukeneyo. Ngaphandle kweethelevishini okanye iiwotshi zealam, amagumbi makhulu kakhulu kwaye ayilelwe ukubonelela ngoxolo lokugqibela.
7. I-Little Palm Island Resort & Spa - Isitshixo esincinci seTotshi, eFlorida
Fika eLittle Palm Island Resort & Spa ngenqwelomoya okanye ngesikhephe ngenjongo yokubaleka kwabathandi, kwaye uphumle kwindawo yokuhamba okanye uthathe uhambo olwandle lolwandle olumhlophe.
Zininzi ukutya okutya okumnandi kwaselwandle okutsha, kodwa akukho ziTV, iiwotshi zealam, okanye iifowuni, kwaye ekuphela kwendlela zii-iguana ezihambahamba kwindlela yebhotile.
Inayo iChampagne ebandayo elinde wena xa ufika, kunye neengqaqa eziqaqambileyo zecoral nje amanyathelo okuya kwi-snorkeling kwilizwe elimangalisayo elingaphantsi kwamanzi kunye neentlanzi ezingaqhelekanga.
8. Indawo yokutyela yobuNtshatsheli - iSedona, eArizona
Indawo yoTyelelo ilungile kwizibini ezijonge indawo yokuphumla, yokuphelisa uxinzelelo enokuthi ikwaphucule impilo yabo iyonke.
UBoynton Canyon, owaziwayo ukufumana amandla aqinisekileyo okuphilisa, ijikelezwe ngamatye abomvu ahlukileyo kaSedona.
Ikwanazo nezindlu iMii Amo, indawo eyaziwayo yokubonelela abathengi enikezela ngezibonelelo ezizodwa njengonyango oluphefumlelwe bubulumko namasiko aseMelika.
Iindawo zokulala zabucala, ukubonwa okumangalisayo, kunye nendawo yomlilo wegesi yeenyosi zonke ziyafumaneka kumagumbi nakwizindlu zangasese, ezigcinwe ezindlwini ezinesidima se-pueblo.
Ukuhamba ngebhayisikile kwintaba, ukuhamba intaba, ukuqubha, igalufa, iindibano zocweyo zokupheka, iyoga, ukucamngca, kunye neminye imisebenzi yonke iyafumaneka.
9. ICliff House - eKapa iNeddick, eMaine
ICliff House Indawo eyaziwayo yaseMaine etsala izibini ezifuna ezothando. Ibisamkela iindwendwe kangangeminyaka engama-150 kwaye ihamba ngaphesheya kweAtlantiki, ibonelela ngemibono yolwandle ephefumlayo kunye ne-spa enonyango olumnandi lokuthambisa.
Zininzi iivenkile zokutyela apho unokufumana khona isampulu ngokumangalisayo, ukutya kwaselwandle okutsha, kunye neendlela ezahlukeneyo zokuzonwabisa ezinje nge-kayaking yolwandle.
Amachibi amathathu, i-labyrinth yokucamngca ngaphandle, iinkqubo zokomelela komzimba, kunye namagumbi abantu abadala kuphela aneendawo zokucima igesi kunye neebhalkhoni zabucala ziphakathi kwezinto eziluncedo.
10. Ibrush Creek Ranch - eSaratoga, eWyoming
Ibhulashi yeRush Creek ilunge kakhulu ukubaleka kwezothando ezimbini. Yonwabela ukuthandana kweWest West kunye noluhlu lwezinto ezenziwa unyaka wonke kwindawo yethu ebutofotofo ebandakanya zonke iifama.
Ukuskiya, ukuhamba ngeqhwa, ukuhamba ngekhephu, kunye nokuhamba ngekhephu konke kuyafumaneka ebusika.
Ngexesha leenyanga ezifudumeleyo, thatha ihashe ukukhwela kwiipropathi zeekhilomitha ezingama-50 zeendlela, funda ukubhabha iintlanzi, ukuziqhelanisa neyoga, kwaye emva koko uphumle ngonyango lwe-spa.
Kwakhona kubandakanya ukutya okumnandi. Uya kuba nokukhetha ukurenta yonke ipropathi okanye enye yezindlu ezintle zeekhabhathi ukuba "Urenta indlu."
Iindawo ezili-10 ezigqibeleleyo zeSki eMelika
1. Indawo ekuthiwa yiStowe Mountain Resort: eStowe, eVermont
Indawo ekuhlala kuyo iStowe Mountain emantla eVermont liphupha le-skier, kunye neehektare ezingama-485 zokubaleka, iindlela ezili-116, kunye neelifti ezili-12 ezamkela abakhenkethi abanomdla kwiingqungquthela.
INtaba iMansfield kunye neSpruce Peak, ezidityaniswa ngokulula yigondola, ziyinxalenye yeholide. Indawo yokuphumla ibandakanya umxube olungileyo weendlela zokuqala kunye neendlela eziphambili, nangona kunjalo, ijolise ikakhulu kubakhenkethi abaphakathi.
Abahambi ngesikhephe banokuvavanya izakhono zabo kwiipampu zendlela epakiweyo, ukutsiba kunye nemizila. Ukuba awufuni ukujongana nethambeka lokwehla, indawo yokubhenela ikwabonelela nge-skiing yelizwe eliwela ilizwe. I-Lodge kwi-Spruce Peak yindawo yokuhlala xa uskiya kwi-Stowe Mountain Resort.
Indawo yokulala yindawo yokuphumla kuphela eSowe evumela ukungena kwi-ski-in, kwaye inikezela ukufikelela okufanelekileyo kuzo zonke iindlela. Phuma kwindawo yokulala kwisiza emva kosuku olude entabeni.
Ke kwelinye lamagumbi endwendwe okudala, iisuti, okanye izindlu zepentente, phumla ukuze wenze imisebenzi yosuku olulandelayo; unokugcina ikhabhathi yokuqeshisa ubunewunewu exhotyiswe ngabapheki babucala kunye nenkonzo yomngcamli yobuqu.
Ihotele eKillington Ski ineendlela ezingaphezu kwama-200 ezisasazeke kwiincopho ezisixhenxe kumbindi weVermont, ngoko ke usenokuqhwitha iintsuku ungaze udinwe. Inani elithe xhaxhe leendlela liqinisekisa ukuba abo batyibela esibhakabhakeni kunye nabo basebenzisa ikhephu kubo bonke ubuchule baya kufumana into abayithandayo.
Intaba, kwelinye icala, ithatha inxaxheba ngakumbi kubadlali abatsibela emkhenkceni abanamava kunabaqalayo. I-Fiddle kaMtyholi, iMida engaphandle, kunye neCascade zonke zibaleka eziya kukushiya uphefumla umoya.
Ukongeza, ipaki yendawo yokuphumla ibonelela ngendawo eyoneleyo yokuziqhelanisa nokuzikhohlisa. Ihotele i-Killington Grand Resort yindawo entle yokuhlala kuba ikuvumela ukuba uskiya ungene kwaye uphume entabeni ngebhulorho egutyungelwe likhephu.
Iphuli eshushu, iibhafu ezishushu, iivenkile zokutyela, igumbi lomdlalo, kunye neklabhu yezempilo konke kuye kwanconywa ziindwendwe zangaphambili. Ukungathethi, utyelelo eKillington Grand Spa emva kosuku kumathambeka yindlela elungileyo yokuphumla izihlunu eziqinileyo.
I-Bretton Woods yeyona ndawo iphambili yokuskiya eNew Hampshire, eneenkonzo ezininzi ukwenza iholide yakho yokuskiya ibe yimpumelelo. Indawo yokuphumla ineelifti ezilishumi ezihambisa imizila engama-98 kunye ne-glades, kunye nee-intshi ezingama-200 zekhephu minyaka le.
Ngaphandle kwethambeka, kukho ulonwabo oluninzi ekufuneka ulwenzile. I-skiing ye-Nordic okanye i-snowshoeing yimisebenzi emibini yasebusika enganyanzelekanga.
Okwangoku, indawo yokutyibilika, ipaki yokuhamba kweekhephu yabantwana, kunye nohambo lweebhayisikile zasebusika zibonelela nangakumbi ngokuzonwabisa kosapho.
I-Sugarloaf yenye yeendawo zokungcebeleka eziphezulu ze-New England, kunye neehektare eziyi-1,240 zendawo ye-ski kunye ne-2,820-foot foot vertical. Iindlela ezili-162 kunye ne-glades zifikelela kuwo onke amanqanaba e-skiers, zibaleka ukusuka ngokulula ukuya kubuchwephesha-kuphela.
Kwaye kunye ne-13 yokunyusa i-ski, uya kuba nakho ukuchitha ixesha elininzi uskiya kunokulinda emgceni ukukhwela uye phezulu. Nangona kunjalo, imisebenzi echulumancisayo ayipheleli apho.
Ukuskiya ngelizwe elinqamlezileyo, ukuhamba ngenja, ukuhamba ngebhayisikile okunamafutha phezu kwekhephu, kunye nokutyibilika komkhenkce kuko konke ukukhetha kubakhenkethi baseSugarloaf.
Zininzi iivenkile zokutyela kunye neevenkile kwisiseko sentaba ukuze uhlale wonwabile.
Iindwendwe zangaphambili zicebisa ukumiswa ngama-45 emaNtla ngokutya okulula ngaphambi kokuya eSugarloaf Mountain Hotel, enebhafu enkulu eshushu ngaphandle, kwindawo yokutyela, indawo yokuphumla kwindawo yokutyibilika, kunye neembono ezintle zeentaba.
5. Intaba yeCrystal: iThompsonville, eMichigan
Indawo yokutyibilika eMidwest, ebekwe ngeekhilomitha ezingama-30 kumazantsi-ntshona eTraverse City, ifumana iinyawo ezili-11 zekhephu ngonyaka, iqinisekisa iimeko ezifanelekileyo.
Iiskiers zinokufikelela kwiindlela ezingama-58 ngokukhetha ukuphakamisa izinto ezisibhozo, ezinye zazo zikhanyiselwe ukuskiya ebusuku. Phantse isiqingatha seendlela ezifanelekileyo kwizikhephe eziphakathi, ngelixa iipesenti ezingama-22 zezabaqalayo kwaye iipesenti ezingama-30 zezabakhweli abanamava.
Iirampu, imibhobho yesiqingatha, ukutsiba, kunye nezinye izinto ziyafumaneka kwimimandla epaki yeendawo ezintathu. Kulabo bafuna ukuhlala kumhlaba othe tyaba, ukuskiya kwilizwe eliphambeneyo kulukhetho.
Ababhenkethi baya kufumana i-rink skating, indawo yokufudumeza ngaphandle, ii-boutique, iivenkile ezithengisa ukutya, iivenkile zokutyela, kunye neendlela ezahlukeneyo zehotele ezinyaweni zentaba.
Ukuba uhamba neqela elikhulu, hlala kwii-Bungalows e-Crystal Den, i-Inn kwiNtaba ukuba ufuna ukudibanisa umsebenzi kunye nokudlala, okanye i-Hamlet yamagumbi eendwendwe zakudala.
6. Ihotele emhlophe yaseWhiteface: eWilmington, eNew York
Awuyi kufumana kuphela intaba ye-ski eqhubekayo kwi Irizothi yeNtaba yeWhiteface, Kodwa uyakufumana olona hlobo luthe nkqo mpuma lweeRockies.
Enye yezona zifundo zide kuPhakathi eMntla-mpuma, kunye "nezilayidi," ezingumqengqelezi, amathontsi afana ne-chute kunye nobunzima bedayimani omnyama, ziphakathi kweempawu ezizodwa.
I-Skiers inokundwendwela iipaki zendlela ye-adrenaline rush engoyiki kangako. Nokuba ufika kwiWhiteface njengesikwere sokubhabha eskreyini, esinye sezifundo zabucala okanye zeqela ezikhoyo sinokukunceda uzithembe kwiindlela.
Emva kokuba ugqibile ukutshiza, zinike ixesha lokujonga izinto zeOlimpiki kule ndawo yeentaba, eyayibambe iiOlimpiki zasebusika zowe-1980.
Emva koko, kulwalamano oluhle losapho olunezinto ezinjengephuli yangaphakathi kunye ne-ice rink, hlala eGolden Arrow Lakeside Resort okanye kwihotele North Woods, zombini ezikufutshane nedolophu yedolophu iLake Placid.
7. Iholide yaseWintergreen: eNellysford, eVirginia
Ubusika eMzantsi abukho ngaphandle kweendawo zayo zokutyela, kunye neVirginia Indawo yokuhlala yaseWintergreen yenye yezona zikhulu. Iilifti ezimbini zokuphumla zibonelela ngokufikelela kwiindlela ezingama-26 zamanqanaba ngamanqanaba obunzima.
Kukho imithambeka engapheliyo apho ungathatha indawo entle, kunye neendlela ezingamathambeka zengcali ezithatha i-skiers ziye ngqo kwisiseko sentaba.
I-Ridgely's Fun Park, icandelo elithile labantwana, kunye nepaki yendawo yokuziqhelanisa ne-ski tricks ejikeleze iminikelo yentaba. KwiWintergreen, iindwendwe zinokubhalisela iqela okanye izifundo zabucala zokushushuluza.
Le ndawo yokuphumla yenza ukungabikho kobungakanani ngokwemisebenzi xa kuthelekiswa neendawo zayo ezisentshona. Xa sele uzalisile ukuskiya, zama ipaki enkulu yokubhabha yelizwe, thatha ukungena echibini lokungena ngaphakathi, okanye uzitotobise kwiWintergreen Spa.
Indawo yokuphumla inikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlala, ukusuka kumagumbi ehotele emveli eMountain Inn ukuya kwikhondomu kunye nokuqeshisa kwendlu.
Uya kuba neembono zeBlue Ridge Mountains nokuba ukhetha yiphi indawo yokuhlala.
8. Indawo yokutyela iTimberline Four Seasons Resort: Davis, West Virginia
The Indawo yokuhlala i-Timberline Four Seasons inikeza iindlela ezahlukeneyo, ukusuka kwiindlela zokuqala ezinobungane ukuya kumdlalo weedayimani omnyama ophindwe kabini.
Umgaqo ophakathi weTwister uvumela abashushumbisi ukuba bagqibelele ukujika kwabo, ngelixa umkhondo onobuhlobo ophakamileyo weSalamander uvumela abaqalayo ukuba behle kwincopho yentaba.
Ukongeza, iipaki ezimbini zendlela zibonelela ngamathuba amaninzi kubatyibilikisi kunye nabahamba ngeqhwa ukuze baziqhelanise nokwenza izinto. Ukutsiba okuncinci kunye neebhokisi ezincinci zifumaneka kwiPaki yeNdawo yeSiqhwa se-Snow kwabo bafuna ukukhululeka kwimidlalo ye-freestyle kunye nezinye.
Xa sele ulungile, yiya kwiPark Terrain Park Park ngeempawu ezinzima nangomgaqo. Ungabhalisela ukusebenza ngomntu ngamnye notitshala oqeqeshiweyo okanye ukhethe isifundo seqela, nokuba lixesha lakho lokuqala kumathambeka okanye ufuna nje ezinye izikhombisi ezongezelelweyo ukuphucula ukuqhuba kwakho.
Indawo yokulala ephambili ineentlobo ngeentlobo zokutya neziselo zokusela ukuzalisa ukutya kwakho emva kokutyibilika kwiskiya, kodwa iindwendwe ziyakuthanda nokundwendwela iivenkile zenyawo kwintaba.
Ihotele i-Timberline ibonelela ngokungena kwi-ski-in / ski-out yokungena kwi-resort, ngelixa ezinye ii-motels kunye neebhedi-kunye ne-Breakfast Breakfast ezikufutshane nazo zikufutshane nentaba.
Indawo yokuphumla, engaphandle nje kweNtaba yeSizwe iRainer Park, yenye yezona ndawo zintle zaseWashington. Iindwendwe zinokufikelela kwiindlela ezingama-57 ezigunyazisiweyo ngokusebenzisa iilifti ezilishumi elinanye, ngaphezulu kwesiqingatha sazo zibaleka kwinqanaba eliphakathi.
Zonke ezinye zahlulwe zangumthambeka wabaqalayo kunye neengcali, zonke ezifumana ikhephu kangangeesentimitha ezingama-500 minyaka le. Malunga neenyawo ezingama-7,000 ngaphezulu komphakamo wolwandle, i-Summit House Restaurant ihambisa ukutya okumnandi kwabakhweli abatyibilikayo.
ICampbell Basin Lodge isebenza phakathi kwentaba yokuhamba, kunye noluhlu lwezinye iindlela zokutya ezongezelelweyo kufutshane nesiseko.
IAlpine Inn, iThe Village Inn, kunye neQuicksilver Lodge zezinye zeendawo ezintathu zokuhlala ezonwabileyo emazantsi kubahambi abakhatheleyo.
Ezi hotele ziyahluka ngesitayile, kodwa zonke zibonelela ngezixhobo ezifanelekileyo ezinje ngeWi-Fi yasimahla kunye nokufikeleleka kwizinyusi zekhephu. Inkqubo ye- Irobhothi yeNtaba yeCrystal imi malunga neekhilomitha ezingama-80 kumazantsi mpuma eSeattle.
Ukuba uyenzile eBreckenridge, sele ufikile kwenye yezona ndawo zintle zokushushuluza kweli lizwe, kwaye izibonelelo zaseBreckenridge Ski Resort ziya kukunceda wenze elona xesha lihle lokuhlala kwakho.
Indawo enkulu yokubaleka nge-ski (malunga neekhilomitha ezingama-60 kumazantsi-ntshona eDenver) yindawo ekucelwa ukuba iphononongwe: ingqungquthela yentaba inyuka ibe zii-12,998, 187 iinyawo, kwaye kukho iindlela ezili-34 ezinikezelwa kukuphakanyiswa kwe-ski ezingama-XNUMX.
Ungasebenza kwizakhono zakho kwenye yeepaki zendlela yomhlaba okanye uzame isandla sakho kwiindlela eziphakamileyo zendlela ezikhethekileyo kule ndawo. Lixesha lokuba ubethe edolophini emva kokusebenza ukutya kwiithambeka.
Iivenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela, iimyuziyam, kunye neendawo zokuthengisa utywala zigcwele kwisithili esidala sedolophu, kuguqula uhambo lwakho lokuskiya lube ngamava enkcubeko.
Abakhenkethi abadiniweyo banokuphumla iintloko zabo kwenye yeeflethi zehotele, ezinje ngeCrystal Peak Lodge kunye neOne Ski Hill Place. I-Ski valet, amatikiti okuphakamisa ngaphakathi endlwini, kunye nendawo entle enokufikelela ngokukhawuleza kwintaba konke kubandakanywa nokuhlala kwihotele ephawuleka.
Siyathemba ukuba ulithandile eli nqaku kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezikufutshane nawe kwaye ziluncedo kakhulu kuwe.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso malunga neendawo ezininzi ekuchithelwa kuzo iiholide ezikufutshane nawe, nceda wenze kakuhle ushiye uluvo kwaye wabelane nabanye ngeli nqaku.
tags:zonke iiholide ezinokubandakanya ulwandle eFlorida, zonke iiholide ezibandakanya ulwandle e-usa, iiholide zonke ezibandakanya i-usa, iiholide zonke ezibandakanya i-usa kwizibini ezitshatileyo, iiholide zonke ezibandakanya mna, iindawo zokungcebeleka ezibandakanya bonke, Iindawo zokutyela ezilungileyo e-usa kwizibini ezitshatileyo, Iindawo zokuchithela iiholide ezilungileyo e usa
Ngubani ohlawulela i-Bugs Exterminator: ngabaqeshisi okanye ngabaqeshi?
Eyona ndlela yokufumana imali eyongezelelweyo yokuvavanya ukuqhuba iimoto ezintsha
Izikhululo zeenqwelo moya eMontana ezineeTheminali kunye neNgcaciso yeNqanaba leNkcukacha
IVictoria Akpan TMLT
UVictoria Akpan unesidanga se-bachelor kwi-Unxibelelwano lobuGcisa kwiDyunivesithi yaseUyo, eUyo, eNigeria. Ungumyili wokuzenzela kunye nomxholo webhlog.
Iimpahla ezigqwesileyo zokuSebenza zaMadoda kunye neeMpahla zeMpahla eziPhezulu eziSebenzayo
IiAlbhamu zeRap eziBalaseleyo zalo lonke ixesha kunye ne-13 yeeAlbham eziBalaseleyo zeKanye West
Ukuhlamba Ubuso Okugqwesileyo kuMadoda aneMgangatho kunye neMisebenzi eMangalisayo
Iindawo zokutyela ezigqibeleleyo eRoma zokutya, iPizza kunye nokunye ukutya kweVegan
Imithi epholileyo kwihlabathi liphela kunye neempawu zayo eziMangalisayo